श्रीमान-श्रीमती एउटै कार्यालयमा काम गर्दा कति फाइदा ? थाहा पाउनुहोस् – Tu Khabar Online
Home / जीवनशैली / श्रीमान-श्रीमती एउटै कार्यालयमा काम गर्दा कति फाइदा ? थाहा पाउनुहोस्
admin2weeks ago	जीवनशैली Leaveacomment 58 Views
कस्ता पुरुषसंग शारीरिक सम्बन्ध बनाउन चाहान्छन युवतीहरु !
श्रीमानले जागिर खाने वा बाहिरको काम गर्ने र श्रीमतीले घरको काम गर्ने सिद्दान्त अब पुरानो भइसकेको छ। श्रीमान-श्रीमती दुवैले बाहिर काम नगरे घर चलाउनै मुश्किल पर्छ।
फेरि, अहिलेका महिलाहरु पढेलेखेका र दक्ष भएकाले विभिन्न कार्यालयमा राम्रो जागिर खाइरहेका छन्। कतिपय त श्रीमान र श्रीमती एउटै कार्यालयमा काम गरिरहेको पनि पाइन्छ। यस्तो धेरैजसो पारिवारिक व्यवसाय भएकाहरुका हकमा हुन्छ।
श्रीमान-श्रीमती एकै स्थानमा बसेर काम गर्दा ‘बोरिङ’ होला भन्ने कतिपयलाई लाग्न सक्छ । तर, यो सत्य होइन । श्रीमान-श्रीमती एउटै कार्यालयमा काम गर्दाका धेरै फाइदा छन् । के हुन् त ती फाइदा ?
कामको लागि राम्रो समझदारी
वैवाहिक जीवनमा श्रीमान-श्रीमतीबीच समझदारी अति आवश्यक हुन्छ। यस्तोमा यदि तपाईंहरु दुवैजना एउटै कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ भने समझदारी झनै बढ्छ । किनभने, तपाईंहरु दुवैले एक अर्काको भूमिका राम्रो सँग बुझ्नसक्नु हुन्छ र उनीहरुलाई समर्थन गर्नुहुन्छ । अनि आफ्नो पेशाको सबै सुखदुख एक-अर्कालाई थाहा हुन्छ।
सँगै यात्रा गर्न पाइने
श्रीमान र श्रीमतीको कार्यालय फरक-फरक हुँदा दुवैलाई जाँदा-आउँदा बाटो मिल्दैन र यात्रामा छुट्टाछुट्टै पैसा खर्च गर्नु पर्छ । तर, एउटै कार्यालय भएमा एउटै सवारी साधनमा सँगै आउने-जाने गर्न सकिन्छ र खर्च कम हुन्छ । सँगै यात्रा गर्दा रमाइलो पनि हुन्छ ।
एक-अर्काका लागि पर्याप्त समय
कार्यालयबाट बेलुका घर फर्किदा तपाईंलाई थकान महसुस हुन्छ र आफ्नो पार्टनरलाई पर्याप्त समय दिन सक्नुहुन्न । तर, यदि दुवै जना एकै स्थानमा काम गर्दा एक-अर्कासँग पर्याप्त समय बिताउन सकिन्छ, चाहे त्यो कामकै सिलसिलामा किन नहोस ।
सफलताको खुसीयाली सँगै मनाउने
सँगै काम गर्दा एक-अर्काको सफलतालाई सेयर गर्न सकिन्छ र सँगै खुशी मनाउन सकिन्छ।
पार्टनरले तपाईंको कामलाई नजिकबाट बुझ्न सक्छन् र तपाईंहरु दुवैले एक अर्काको लागि आवश्यक व्यावसायिक समर्थन दिन सक्नुहुन्छ । साथै आवश्यक परेमा आफ्नो पार्टनरसँग सल्लाह लिन र दिन सक्नुहुन्छ।
Previous अमेरिकामा सवारी दुर्घटनाः एकै परिवारका ३ नेपालीको मृत्यु, २ घाइते
Next सांसदको प्रश्‍न : तीजमा साडी किन्दा ठगिएँ, बजार अनुगमन खोई?
१७ वर्षको हुँदा अंग्रेजी गित गाउँदै ब्रेक डान्स गरेको दुर्लभ भिडियो देखेपछि विगत सम्झेर रोए ‘अघोर बाबा’ (भिडियो)
बिगत ३० वर्ष देखि अघोरीबाबा बनेका मृतुन्जय बाबासंग भूतप्रेत, किचकन्या र अन्य विषयमा कुराकानी गरिएको …